Izinhlobo zemibhede yasesibhedlela | I-JBH Medical
Umbhede wasesibhedlela uvame ukubhekiswa embhedeni onesi, owakhelwe ngokwezidingo zokwelashwa kwesiguli nemikhuba yokuphila egcwele imibhede, futhi yakhelwe namalungu omndeni ukuthi awuphelezele. Inemisebenzi eminingi yobuhlengikazi nezinkinobho zokusebenza. Isebenzisa umbhede ovikelekile futhi ophephile, njengokuqapha isisindo, ukudla ngemuva, nokujika okuhlakaniphile, ukuvimbela izilonda zokulala, ukuxhuma kwengcindezi okungekuhle, ukuqapha i-alamu embhedeni, ukuthuthwa kwamaselula, ukuphumula, ukuvuselelwa (ukunyakaza, ukuma), imithi ukumnika neminye imisebenzi. Umbhede wokulungiswa kabusha ungasetshenziswa wedwa noma ngokubambisana nezindlela zokwelapha noma zokwelapha. Imibhede yabahlengikazi be-Turnover ngokuvamile ayikho ngaphezu kwe-90cm ububanzi futhi ingumbhede owodwa onobubanzi obunye. Kuyinto elula ukubonwa kwezokwelapha, ukuhlolwa nokusebenza kwamalungu omndeni. Ingasetshenziselwa abantu abaphilile, abakhubazeke kakhulu, asebekhulile, ukungasebenzi komchamo, iziguli ezilimala ebuchosheni ekwelashweni okuzinzile noma kokululama ekhaya, ikakhulukazi ukwenza okusebenzayo. Isisetshenziswa esijwayelekile sombhede wamandla sifaka ikhanda lombhede, ifreyimu yemisebenzi eminingi, unyawo lombhede, umlenze, umatilasi wombhede, isilawuli, induku yokucindezela kagesi, onogada aba-2 abangakwesokunxele nangakwesokudla, kanye nezinsimbi ezi-4 ezithule ngomsindo. Itafula lokudlela elihlanganisiwe, itreyi elilodwa lompompi womoya eli-anti-decubitus, ishelufu elingaphansi kombhede, ama-alamu wokuqapha ukumanzisa umbhede omanzisa ama-2, iqoqo elilodwa lenzwa yokuqapha isisindo, ithebula elilinganayo lokuhambisa nezinye izinto. Kunemibhede ejwayelekile, imibhede yokuvuselela, nemibhede yokujika ekhaliphile. Imibhede yasesibhedlela nayo ingabizwa ngokuthi imibhede yasesibhedlela, imibhede yezokwelapha, imibhede yabahlengikazi yokuvuselela, njll. Yimibhede esetshenziswa iziguli ngenkathi zelashwa, zilungiswa, futhi zilulama. Asetshenziswa kakhulu ezibhedlela ezinkulu, ezikhungweni zezempilo zasemalokishini, ezikhungweni zezinsizakalo zezempilo zomphakathi, ezikhungweni zokuhlumelelisa, nasekunakekelweni kwasekhaya. Iwadi njll.
Ngokwalokho okubhaliwe, kungahlukaniswa kube imibhede ye-ABS, yonke imibhede yensimbi engagqwali, imibhede yensimbi engagqwali, yonke imibhede yensimbi yokufafaza, njll.
Ngokwenhloso, ingahlukaniswa ibe imibhede yezokwelapha nemibhede yasendlini.
Ngokwalo msebenzi, ungahlukaniswa ngemibhede yesibhedlela kagesi nemibhede yesibhedlela yezandla. Imibhede yesibhedlela kagesi ingahlukaniswa ngemibhede yesibhedlela kagesi esebenza kahlanu kanye nemibhede yesibhedlela kagesi esebenza kathathu. Imibhede yesibhedlela esetshenziswayo ingahlukaniswa ngemibhede yesibhedlela esinezimbiwa ezimbili, imibhede yesibhedlela esisodwa, kanye nemibhede yesibhedlela.
Umbhede wasesibhedlela osebenza ngogesi
Umbhede wakhiwa ngezinto zokushisela i-aluminium, indawo yombhede iyisakhiwo senetha, futhi indawo yombhede iyaphefumula. Yonke indawo yombhede iphathwa ngokufafaza nge-electrostatic.
I-guardrail yenziwe ngamaphrofayli e-aerospace aluminium futhi angagoqwa.
Amasondo amane asebenzisa ama-casters athule athule futhi azikhiyele u-125mm, azinzile futhi athembekile.
Itafula lokudlela liyithebula lokudlela elibuyiselekayo elingu-30cm elibuyisekayo, eliqinile futhi eliqinile.
I-angle yokugoqa engemuva: 0-75 °, i-angle yokugoqa yomlenze: 0-90 °
Ubukhulu: 2000 × 900 × 500mm (ubude x ububanzi × ukuphakama kombhede)
Usayizi wokuma kwendlu yangasese: 225 × 190mm
Multifunctional manual hospital kombhede
Ukuthatha imibhede ye-ABS njengesibonelo, imibhede yemisebenzi eminingi ihlukaniswe yaba imibhede yama-rocker amabili, imibhede yetshe elilodwa, nemibhede eyisicaba.
Umsebenzi womkhiqizo wombhede wesibhedlela osetshenziswayo uyefana nombhede wesibhedlela kagesi, kepha isiguli asikwazi ukuwusebenzisa uqobo futhi sidinga usizo lomuntu ohambisana naye. Ngoba intengo iphansi kunaleyo yemibhede kagesi esibhedlela, ilungele ikakhulukazi iziguli ezisembhedeni isikhathi esifushane. Ngasikhathi sinye, kwehlisa umthwalo nengcindezi yabasebenzi abahamba nabo.
Umbhede wasesibhedlela we-rocker ophethe insimbi engenansimbi
Ikhanda lombhede lensimbi engagqwali, uhlaka lwensimbi olufuthwe ngensimbi nombhede ongaphezulu kunengqondo ngesakhiwo futhi luqinile. Ingakwazi ukubona imisebenzi emibili ye-backrest nokugoba umlenze. Ifanele iziguli esezikhulile ezingakwazi ukuvuka embhedeni noma ukuphazamiseka ukuphuma embhedeni. Ibahlinzeka ngezinsizakalo ezikhethekile zokunakekelwa ezidingekayo ukuze bavuseleleke, belashwe, bahambe nempilo yansuku zonke, lithuthukisa izinga lokunakekelwa, futhi lithuthukisa ikhwalithi yempilo yeziguli, ikakhulukazi efanelekile Umndeni, izikhungo zokunakekela ezokwelashwa zomphakathi, amakhaya abantu abadala, izibhedlela zabadala
recliner embhedeni iziguli, imibhede yokunakekelwa okunamandla, ezilahlwayo kwezokwelapha, umbhede wesibhedlela esinamandla, imaski yomlomo wobuso, umbhede wesibhedlela othomathikhi ngokuphelele,
recliner embhedeni iziguli, imibhede yokunakekelwa okunamandla, umbhede wesibhedlela othomathikhi ngokuphelele, imaski yomlomo wobuso, umbhede wesibhedlela esinamandla, ezilahlwayo kwezokwelapha,